Ergeyga cusub ee Qaramada Midoobay - BBC Somali - Warar
Ergeyga cusub ee Qaramada Midoobay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 29 Abriil, 2013, 18:11 GMT 21:11 SGA
Mr Kay waxaa uu beddelayaa Augustine Mahiga, oo shaqadiisa soo gebagebeynaya saddexda bisha Juun ee sanadkan 2013.
Xoghayaha guud waxaa uu uga mahadceliyay sidii daacadnimada lahayd ee uu hawshiisa u soo gutay saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Hoggaamintiisa ku dayashada mudan ee gacan siinta sidii looga bixi lahaa habkii kala guurka siyaasadeed ee siddeedda ka jiray Soomaaliya ee dhammaaday bishii September ee sanadkii 2012kii ayaa xusid gaar ah mudan, ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay xafiiska xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.
Waxaana uu xoghayaha guud si faraxdi ku jirto oo aad u qota dheer u xasuustaa in waxqabadkii Mr Mahiga uu dhigay aasaaska ay haatan dowladda federalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka ay ka sii amba qaadi karto inay nabadda dhisto isla markaana xoojiso ammaanka iyo horumarinta dalka.
Mr Kay waxaa uu hadda yahay agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo commonwealth-ka ee dalkan Britain u qaabilsan qaaradda Afrika, jagadaas oo uu yahay laga soo bilaabo sanadkii hore ee 2012-kii.
Shaqadaas kahorna, waxaa uu danjire ka soo noqday dalalka DRC intii u dhexaysay 2007 ilaa 2010kii iyo Sudan 2010 ilaa 2012kii. Waxaa kaloo uu soo qabtay jagada ah iskuduwadaha goboleed ee koofurta Afqanistaan iyo madaxa kooxda dib u dhiska gobolka Helmand intii u dhexaysay 2006 iyo 2007.
Mr Kay oo dhashay sanadkii 1958-kii waxaa uu leeyahay xaas iyo saddex carruur ah oo kala ah: labo gabdhood iyo wiil.